Diidmadii M/weyne Deni ee codsigii DF Soomaaliya, ma wuxuu soo dadajiyey in la qaado Xayiraadii Jubbaland.
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay si adag u naqdiyey dalab uga yimi Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo ku wajahnaa in uu ka baaqsado magaalada Kismaayo, isla markaasna uu ka baaqsado u tagida Axmed Madoobe oo dhiganaya Munaasabadda Caleema-saarka.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in ay dawladda Soomaaliya aqoonsatay Koonfur Galbeed oo ay xoog ku dhistay oo ay xataa xirxirtay Musharaxiintii loolanka la sameyn lahaa, taas bedelkeedan Axmed Madoobe fuliyey dhamaan geedi socodka doorashooyinak madaxa banaan.
Dad badan ayaa rumeysan in diidmadii Puntland ee dalabka dawladda Faderaalka Soomaaliya ay kaliftay in ay Xukuumadda Faderaalka ka laabato qaraarkii ay horey xayiraadda ugu soo rogtay magaalada Kismaayo.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka carooday talaabadii ay qaaday Puntland, kuna diiday codsigiisii ahaa in ay ka baaqsadaan Kismaayo.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa si hoose ugu sheegtay shirkadaha duulimaadyada in ay cid kasta u qaadi karaan Kismaayo, waxaana taasi muuqatay in ay madaxda dawladda Faderaalka ka dabceen go`aankoodii hore.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa 23-kii bishii lasoo dhaafa gabi ahaanba hakisay duulimaadyadii tagi lahaa Kismaayo, maalin kahorna waxay u diiday madaarka Muqdisho in uu Kismaayo ka aado Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed.
Taas oo ay dawladdu u ahayd in ay cadaadis saarto Axmed Madoobe, waxaa kasii horeeyey in duulimaad kasta oo u socda ama katagaya Muqdisho ay qasab ku tahay in uu soo maro caasumada Soomaaliya.